Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || डेंगे नियन्त्रण गर्ने आफैंले हो – kayakairan.com
डेंगे नियन्त्रण गर्ने आफैंले हो
१० भाद्र २०७६, मंगलवार १४:४०
डेंगेबाट अब कोही अछूतो रहेन । कुनै ठाउँ बचेन । कुनै मौसम बाँकी रहेन । देशभर, वर्षभर । जहाँ जहिले पनि देखिने भो डेंगे । अर्थात लामखुट्टे । कालो सेतो टाटे लामखुट्टे । एडिस एजिप्टाइ जातको । यसले दिनमा टोक्छ । उज्यालोमा । राति कता जान्छ कुन्नि ? अनि पोथीले मात्रै सार्छ डेंगे । सार्नलाई डेंगे संक्रमितलाई टोकेको हुनुपर्छ । अर्थात संक्रमित रगत चुसेर स्वस्थ्य मानिसको रगतमा लगी मिसाउनुपर्छ । अनि लाग्छ थप एकलाई डेंगे ।
पूर्वी नेपालमा महामारीको रुपमा फैलिएको डेंगे संक्रमण चितवनमा पनि देखिएको छ । एकजनाको ज्यानै लिइसकेको छ । देशका अरु ठाउँमा पनि लिइसकेको छ । कयौं ठाउँमा कीट अभाव छ रे । अर्थात परीक्षण गर्ने औषधि । परीक्षण गर्नै नपाएपछि कसरी थाहा पाउनु संक्रमण । कसरी गर्नु उपचार ? अनि त अन्धाधुन्ध हुने भो । महामारी बन्ने भो । समस्या पर्ने भो ।
डेंगे ज्वरोबाट जोगिनका लागि एकमात्र सर्त लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु हो । त्यसका लागि सरसफाइ पहिलो सर्त हो भने सरसफाइ गर्दा पनि लामखुट्टे आए टोकाइबाट जोगिन झुल टाँगेर सुत्नु सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हो । सफा पानी जमेको देख्नेबित्तिकै हटाउनुप¥यो । स्रोत नै अन्त्य गरेपछि बढ्न पाउँदैन । लामखुट्टेले आफ्नो जीवनकालमा हजारौं फुल पार्न सक्छ । त्यसबाट लार्भा बन्छ । लार्भा विकसित भएर लामखुट्टे बन्छ । फुल पार्नै नदिने । लार्भा बन्नै नदिने । अर्थात लामखुट्टे बन्नै नदिने । अनि सकिन्छ लामखुट्टे । त्यसै गरौं ।
आफ्नो घर आसपास अरुले आएर सफा गरिदिने होइन । सरकारले मात्रै गर्नुपर्ने होइन । अनेक अभियान्ता आउनै पर्ने होइन । आफ्नो घर आँगन आफैंले सफा गर्न सक्छौं । आँगन पुर्न सक्छौं । करेसा पुर्न सक्छौं । घरभित्रै पानी जम्न सक्ने ठाउँहरुको स्रोत नाश गर्न सक्छौं । त्यसै गरौं । गमला, फुलदानी, खाली बट्टा, अल्कत्रा वा मट्टिटतेलका खाली ड्रमहरु, गाडीको काम नलाग्ने टायरमा जमेका पानीमा यसले फुल पार्छ । पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्न, कूलरमा जम्मा भएको पानी सफा गर्न सबै सचेत भयौं भने लामखुट्टेको स्रोत नै अन्त्य भएर जान्छ ।